Madaxweyne Ismaciil Curmar Geele iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada Muqidhisho – Walaal24 Newss
Madaxweyne Ismaciil Curmar Geele iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada Muqidhisho
March 16, 2019	0	By walaal24
Madaxweynaha Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa saaka soo gaaray magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Geelle oo booqasho rasmi ah oo labo maalmood ah ay uga bilaabatay dalka ayaa waxaa Garoonka Aadan Cabdulle ku soo dhaweeyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubno ka tirsan Golayaasha Dowladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool Gobolka Banaadir.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo wafdigiisa oo si heersare ah loo soo dhaweeyay ayaa waxay isaga iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya salaan sharaf ka qaateen cutubyo ka tirsan Kooxda Baambayda ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, waxaana isla goobta loogu garaacay astaanta Qaranka ee labada dal.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa loo galbiyay Aqalka Madaxtooyada ee Villa Soomaaliya halkaas oo ay maanta iyo berri wadahadallo labo geesood ah kula yeelan doonaan madaxda Qaranka.
Soomaaliya iyo Jabuuti waxay wadaagaan xiriir qotodheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan, waxayna booqashada Madaxweyne Geelle ee Muqdisho sii xoojinaysaa iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, dhaqanka, siyaasadda iyo ganacsiga.
Daawo: Madaxweyne Dani oo daah furay keydka shidalka Diyaradha lagu soo kordhiyay Garonka diyaradaha Garoowe
Madaxweyne Muuse Biixi iyo Ra’iisal wasaare Abiy Axmed kulan kooda maxay ka wada hadleen?
Ciidanka Xoogga Dalka oo soo saaray Miinooyin ay Al-shabaab ku aaseen Waddada isku xirta Dhanaane iyo Jilib-marko
Ciidanka Xoogga dalka oo howlgal qorsheysan ku soo furtay dad afduub ay u heysteen kooxda Al-Shabaab
Magaalada Garowe oo ka socota qaban qaabo lagu soo dhaweynayo Ra’iisal wasaare Kheyre
Ciidanka Xoogga Dalka oo gacanta ku dhigay Horjooge katirsan kooxda Al-shabaab
Dhageyso: Wasiir Oomaar “Dibuhabeynta Garoomada waxa inoo qorsheysneed Garoomo inaan ku bilowno kan Beydhabo”
Dhageyso: Dagaalkii Deegaanka Dhummay oo Hakaday iyo Tirada Khasaraha Labada Dhinac
Dhageyso: Guddiga Arrimaha Gudaha iyo Amniga ee Golaha Shacabka oo la kulmay Wasiirka Amniga iyo Taliyaha Hay’adda NISA
Dhageyso: Ciidamada Xoogga Dalka ee Gobalka Hiiraan oo dilaya dagalamayaal ka tirsan Al-shabaab
Dhageyso: Gudomiye ku xigenka labaad “Xildhibaanada Golaha Shacabka waxay xaq u leeyihiin iney difacdaan amnigooda, xasanadooda iyo xurmada xaruntooda”
Daawo: Ra’iisal Wasaaraha XFS oo kormeer ku tagay xarunta dhexe maamulka Hawada ee Soomaaliya
Daawo: Wasiir Beyle oo xafiiskiisa ku qabtay Shirkii jara’id ee bilaha ahaa uga hadalaya Deyn cafiska iyo kororka dhaqaalaha Dowladda
Daawo: Xeer ilaaliyaha Qaranka oo ka hadlay danbiyada loo heysto Wasiir ku-xigeenka Arimaha Dibada
Daawo: Madaxweyne Muuse Biixi oo sheegay in ay tababar ku jirto dowlada Farmaajo una soo tababarneyso Soomaliland